Sanju – Page 3 – Filimside.net
Ranbir Kapoor Iyo Karishma Tanna Heeskooda Mujhe Chand Pe Le Chalo Wali Ma Daawatay (+Video)
Sanju todobaadkiisa sedexaad ayuu bilawday oo uu tiyaatarada saaranyahay waana mashruuc guul taariikhi ah gaaray waxuuna ka talaabsan doona 300 Crore. Heeskan mashruucan laga soo bandhigay waa hees gaaban oo ay wada jilayaan Ranbir Kapoor […]
Rasmi: Filimka Sanju iyo Jimcadiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay
Filimka Sanju ayaa ganacsi wacan sameeyay Jimcadiisa sedexaad wuxuuna keenay 4 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan haatan wadarta guud inuu soo xareeyay 294 Crore (Trade Figure). Sanju maanta ayuu gaari doonaa darajada 300 Crore oo sabti ah ganacsiga […]
Sanjay Dutt Waa Ninkii Hooyadisa Oo Sakaraad Ah Sigaar Ku Dulcabay Xili Hospital Joogto!!
July 13, 2018 Ali Aadan
Baba of Bollywood khaladaadiiska hore marka uu soo xasuusrto ilmada ayaa ka qubata isagoo in badan ka qoomameya noloshiisan ciqaaba. Dutt bilawgii noloshiisa wey isku qasneed maadama uu saaxiib la noqday daroogada xiligaasna waxay ahed […]
Sanju Oo Kaalinta Afaraad Ka Galay Filmada Todobaadka Labaad Lacagaha Ugu Badan Soo Xareyeen!!
Inaba caadi ma ahan mashruuca Sanju sida dar darka ah ee uu kusocdo waxuuna maalinwalba soo kordhinayaa iskoo cusub waa film aan xili fasax ah la daawanin hadana kaalinta afaraad ka galay filmada todobaadka labaad […]
Rasmi Filmka Sanju Iyo Todobaadkiisa Labaad Ganacsiga Uu Sameeyay 300 Crore Ayuu Ku Dhowaaday!!
Filmka Big Blockbuster-ka noqday Sanju ayaa si rasmi ah u noqday filmka Bollywoodka sameyaan midkiisa lacga ugu badana keena sanadkaan qeybtiisa hore waxaana macquul ah inuu sidaas ku dhameesto sanadkaan hadii aflaamta la sugaayo hoos […]
Sanju oo noqday Big Blockbuster iyo filmka sanadkaan lacagaha ugu badan soo xareyo waxaa looga hadlay nolosha Super Star Sanjay Dutt oo uu shaashada ku jilay Ranbir Kapoor halka uu Director ka ahaa Rajkumar Hirani. […]
Top 10: Waa Kuwee 10-ka filim 2018 lacagaha ugu badan soo xareeyeen ee Bollywood-ka sameeyeen
Sanju ayaa si rasmi ah u noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay 2018 asigoo mudo 13-maalmood ah ku keenay 285 Crore (Trade Figure). Sanadkan 6-da bilood ee ugu horeesay waxaa hogaanka Bollywood-ka u haayay Padmaavat […]
Hamblayo Ranbir Kapoor iyo Director Rajkumar Hirani Madaama Filimkiina Sanju Noqday 2018 Midka Ugu Lacagta Badan. Filimka Sanju ayaa maalintii shalay ahayd ama arbacadiisa labaad keenay 6.25 Crore taasi oo ka dhigtay mudo 13-maalmood ah inuu soo […]
Ranbir Kapoor waxuu Hindiya sanadkaan ku qabsaday mashruucisa xiisaha leh ee Sanju kaaos uu oga hadlaayo nolosha halyeey Bollywood Sanjay Dutt waana film tiyaatarada ganacsi taariikhi ah ka sameenayo. Wali waxaa socoto soo bandhigitaanka muuqaalada […]
Rasmi: Filimka Sanju iyo Talaadadiisa Labaad Ganacsiga Uu Sameeyay
Filimka Sanju ayaa keenay 7.50 Crore (Trade Figure) Talaadadiisa labaad wuxuuna sameenayaa 15% hoos u dhac maal maha shaqada halka maal maha shaqada laga nasanaayo uu sare u kac waali ah sameenayo. Sanju haatan wuxuu soo xareeyay 278.58 […]